Uyesaba umama womntwana ‘owadlwengulwa’ | News24
Uyesaba umama womntwana ‘owadlwengulwa’
UHLALELE ovalweni umama wentombazanyana yaseMbali e-Unit BB okusolwa ukuthi yadlwengulwa owesilisa abaziwa ngomalume ohambisa izingane esikoleni.
Lona wesifazane uthi ukuthethwa yicala kukaMnuz Zwe Sithole (46) emva kwezinsolo zokudlwengula ingane yakhe eneminyaka emine nje, sekumfakele itwetwe elikhulu. Isehlakalo senzeke ngoNhlangulana (June) lapho kwaboshwa uSithole mayelana necala lokudlwengula. NgoNcwaba (August) uSithole waphuma emva kokuba inkantolo ithole ukuthi akanacala ngenxa yobuufakazi obachazwa njengobungekho.
Umama womntwana uthe akeneme ngalokhu futhi waphinde wasola amaphoyisa ngokungamazisi futhi amtshele mayelana nokuqhubeka kuze kube icala liyacishwa. Uthe yize engazi ngendlela amaphoyisa asebenza ngayo kodwa uyakholelwa ukuthi njengomzali okunguye owavula icala unelungelo lokwaziswa ngokuqhubekayo ngecala.
Kamuva nje uthe njengoba uSithole esephumile uzizwa yena nomntwana wakhe benokwesaba okukhulu ngoba uSithole unakho ukumlandela yize kodwa ebe engasho lutho.
USithole yena uziphikile lezi zinsolo wachaza lona wesifazane njengomuntu othikamezekile ekhanda lakhe ngokuthi aze amsole ngokumlandela. Uthe usambone kanye kuphela futhi nalokho kwenziwa ukuthi yena ungumshayeli olanda izingane esikoleni yingakho-ke aye ahlangane nabantu njengomuntu osuke esemgwaqeni.
“Mina lapha eMbali isekhaya futhi ngisebenza ngomgwaqo. Ngithutha abantwana, ngakho-ke ngeke ngingabonakali emgwaqeni wangasekhaya ngoba ngiyashayela zonke izinsuku.
“Ngisambone kanye selokhu ngaphuma. Uma ethi mina ngiyamlandela angikaze ngize ngikwenze lokho. Ngambona ehamba nayo ingane kodwa ayikho into engayisho kuyena kunalokho wabamba ingane yakhe ubona ukuthi uyibalekisela ukuthi ibona mina,” kusho uSithole.
Umama womntwana yena uthi useze wayisusa ingane lapho behlala khona ngoba kuba ukumbona uSithole yesabe, ithi umalume uzoyibulala.
“Angizizwa ngiphephile, impilo yami neyomntwana wami isengcupheni. Umntwana usaba ngisho ukugibela imoto, kungakho nje sengivele ngimhambise mina qobo lwami esikoleni.
“Nakhona esikoleni ngabayala ukuthi bangalinge banikeze muntu imvume yokulanda umntwana ngaphandle kokuthi alandwe ugogo wakhe “
UZIZWA YENA NOMNTWANA WAKHE BENOKWESABA OKUKHULU NGOBA USITHOLE UNAKHO UKUMLANDELA YIZE KODWA EBE ENGASHO LUTHO